XOG HOOSE: Farmaajo iyo Khayre oo kulan xasaasi ah ka yeeshay xariga wasiir Janan -News and information about Somalia
Home Warkii XOG HOOSE: Farmaajo iyo Khayre oo kulan xasaasi ah ka yeeshay xariga...
XOG HOOSE: Farmaajo iyo Khayre oo kulan xasaasi ah ka yeeshay xariga wasiir Janan
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo shalay dalka dib ugu soo laabtay, ayaa xalay xili dambe ah waxa uu kulan degdeg ah ugu yeeray ra’iisul wasaarihiisa, Xasan Cali Khayre.
Kulanka labada mas’uul oo lagu gorfeeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee waddanka ayaa waxaa lagu soo qaadey xariga wasiirka amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaasi ku xiran Muqdisho.
Inkasta oo aysan gaarin wax go’aan oo ah ku wajahan arrintan, Khayre ayaa isku dayey in uu ka dhaadhiciyo madaxweynaha in qabashadiisu fure u noqon doonto in ay helana xog dheeri oo ku aadan Axmed Madoobe.
Dhinaca kale, madaxda ayaa waxay kawada xaajoodeen xaaladaha Galmudug oo kamid ah qorsheyaasha ay madaxda haatan jirta doonayaa in ay dib ugu soo laabtan kuraatooda doorashada 2020-ka.
Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidamada sirdoonka, Fahad Yaasiin Daahir, kaasi oo la rumeysan yahay in uu yahay ninka ugu awooda badan xukuumadda haatan haysa taladda ugu sareysa dalka.
Previous articleSAWIRRO: Ciidamo Itoobiyaan ah oo ka baxay Soomaaliya.
Next articleRa’iisul Wasaare Kheyre Oo Gaaray Magaalada Dhuusamareeb
Culimada Alshabaab oo Siyaasiga C C shakuur xukun ku riday, soona jeediyey in magaca laga bedelo
Shir Hadda Villa soomaaliya Ka socdo & Arin Farmaajo Ka Gaabiyey Oo Laga Arinsanayo
Thaabit Cabdi” Waa muhiim in doorashada waqtigeeda ku dhacdo, ayna noqotaa mid Xalaal ah,”
Al-shabaab oo 14 Askari ka dilay Amisom
Mareykanka Oo War Kasoo Saaray Duqeyn Uu Ka Fuliyay Jubbada Hoose